23 Belam wee gwa Belak, sị: “Wuoro m ebe ịchụàjà asaa n’ebe a,+ kwadebekwara m oké ehi asaa na ebule asaa n’ebe a.” 2 Ozugbo ahụ, Belak mere kpọmkwem dị ka Belam kwuru. E mesịa, Belak na Belam chụrụ otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.+ 3 Belam wee gaa n’ihu ịgwa Belak, sị: “Guzo n’akụkụ àjà nsure ọkụ gị+ ka m gaa. Ikekwe, Jehova ga-abịakwute m. Ọ bịakwute m,+ m ga-agwa gị ihe ọ bụla o gosiri m.” O wee gbagoo n’ugwu ọhịa na-adịghị. 4 Mgbe Chineke bịakwutere Belam,+ Belam sịrị ya: “M doro ebe ịchụàjà asaa n’ahịrị, m wee chụọ otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.”+ 5 Jehova wee tinye okwu n’ọnụ Belam,+ sị: “Laghachikwuru Belak, nke a bụkwa ihe ị ga-ekwu.”+ 6 O wee laghachikwuru ya, ma, lee! ya na ndị isi niile nke Moab guzo n’akụkụ àjà nsure ọkụ ya. 7 O wee jiri ilu+ malite ikwu, sị:“Belak eze Moab nwara isi n’Eram+ duru m,Site n’ugwu ndị dị n’ebe ọwụwa anyanwụ wee sị:‘Bịa bụọrọ m Jekọb ọnụ.Ee, bịa kọchaa Izrel.’+ 8 Olee otú m ga-esi bụọ ndị Chineke na-abụghị ọnụ ọnụ?+Olee otú m ga-esi kọchaa ndị Jehova na-akọchaghị?+ 9 N’ihi na n’elu oké nkume ka m si na-ahụ ha,N’ugwu ka m sikwa na-ahụ ha.Ha bipụrụ iche+ n’ebe ahụ n’ụlọikwuu dị ka otu mba,Ha adịghị agụnye onwe ha+ ná ndị mba ọzọ. 10 Ònye gụtụworo ájá Jekọb ọnụ,+Ònye gụtụwokwara otu ụzọ n’ụzọ anọ nke Izrel ọnụ?Ka mkpụrụ obi m nwụọ ọnwụ ndị ezi omume,+Ka ikpeazụ m mesịa dị ka nke ha.”+ 11 Belak wee sị Belam: “Gịnị bụ ihe a i mere m? Ọ bụ ka ị bụọ ndị iro m ọnụ mere m ji kpọta gị, ma, lee, ị gọziwo ha gabiga ókè.”+ 12 O wee zaa, sị: “Ọ́ bụghị ihe ọ bụla Jehova tinyere n’ọnụ m ka m ga-ahụ na m kwuru?”+ 13 Belak wee sị ya: “Biko, soro m gaa ebe ọzọ ị pụrụ ịnọ hụ ha. Ọ bụ naanị otu nsọtụ ha ka ị ga-ahụ,+ ị gaghị ahụcha ha niile. Si n’ebe ahụ bụọrọ m ha ọnụ.” 14 O wee kpọrọ ya gaa n’ala Zofim, n’elu Pisga,+ wee wuo ebe ịchụàjà asaa ma chụọ otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.+ 15 E mesịa, ọ sịrị Belak: “Guzo n’ebe a n’akụkụ àjà nsure ọkụ gị, ka mụ onwe m gakwuru ya n’ebe ahụ.” 16 Jehova wee bịakwute Belam wee tinye okwu n’ọnụ ya, sị:+ “Laghachikwuru Belak,+ nke a bụkwa ihe ị ga-ekwu.” 17 O wee bịakwute ya, ma, lee! o guzo n’akụkụ àjà nsure ọkụ ya, ya na ndị isi Moab. Belak wee sị ya: “Gịnị ka Jehova kwuru?” 18 O wee jiri ilu malite ikwu, sị:+“Belak, bilie gee ntị.Nwa Zipọ,+ ṅaa m ntị. 19 Chineke abụghị mmadụ nke na ọ ga-agha ụgha,+Ọ bụghịkwa nwa nke mmadụ nke na ọ ga-akwa ụta.+Ọ bụrụ na o kwuo ihe, ọ́ gaghị eme ya,Ọ bụrụ na o kwuo okwu, ọ́ gaghị emezu ya?+ 20 Lee! A kpọtawo m ka m nye ngọzi,Ya onwe ya agọziwokwa,+ agaghị m agbanwe ya.+ 21 Ọ dịghị ike anwansi+ ọ bụla ọ hụrụ megide Jekọb,Ọ dịghịkwa nsogbu ọ bụla ọ hụrụ megide Izrel.Jehova bụ́ Chineke ya nọnyeere ya,+Mkpu otuto a na-etiri eze na-ada n’etiti ya. 22 Chineke si n’Ijipt na-akpọpụta ha.+Ịwụ ọsọ ya dị ka nke atụ́.+ 23 N’ihi na ọ dịghị ọgwụ ọ bụla a ga-akọ Jekọb,+Ọ dịghịkwa afa a ga-agba megide Izrel.+A pụrụ ikwu ugbu a banyere Jekọb na Izrel, sị,‘Lee nnọọ ihe Chineke rụrụ!’+ 24 Lee, otu mba ga-ebili dị ka ọdụm,Ọ bụkwa dị ka ọdụm ka ọ ga-ebili.+Ọ gaghị amakpuru ruo mgbe o riri anụ o gbutere,Ọ ga-aṅụkwa ọbara ndị e gburu egbu.”+ 25 Belak wee sị Belam: “Ọ bụrụgodị na i nweghị ike ịbụtụ ha ọnụ, i kwesịghị ịgọzi ha ma ọlị.” 26 Belam wee zaa Belak, sị: “Ọ̀ bụ na mụ agwaghị gị, sị, ‘Ọ bụ ihe niile Jehova ga-ekwu ka m ga-eme’?”+ 27 Belak wee sị Belam: “Biko, bịa. Ka m kpọrọ gị gaa ebe ọzọ. Ikekwe, ọ ga-adị mma n’anya ezi Chineke ka ị nọrọ ebe ahụ bụọrọ m ha ọnụ.”+ 28 Belak wee kpọrọ Belam gaa n’elu Piọ, nke chere Jeshaịmọn+ ihu. 29 Belam+ wee sị Belak: “Wuoro m ebe ịchụàjà asaa n’ebe a, kwadebekwara m oké ehi asaa na ebule asaa n’ebe a.”+ 30 Belak wee mee dị ka Belam kwuru, o wee chụọ otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.+